LLC "Aksentis" - Magazine "nduku System"
N'ime afọ ndị gara aga, LLC Aksentis anọwo na-abụ otu n'ime ndị isi na-emepụta mkpụrụ nduku na Russia.
Companylọ ọrụ ahụ malitere ọrụ ya na 2012, na mbido, mpaghara ihe ọkụkụ abụghị ihe karịrị hectare 200 nke poteto a na-ere ahịa.
N'oge a, ihe owuwu nke ebe a kụrụ akụ gụnyere ihe karịrị otu puku hectare nke poteto mkpụrụ, ihe karịrị puku atọ na-eto eto, yana ntụgharị ihe ọkụkụ maka isi nri.
LLC Aksentis nwere nyocha dị ike na ntọala nke mepụtara iji hụ na mkpụrụ mịpụtara zuru ezu. Usoro mmepụta mkpụrụ bụ isi gụnyere ụlọ nyocha nke micro-propagation nke nwere akụrụngwa ọgbara ọhụrụ yana ụlọ ọrụ griin haus dị elu, nke na-enye ohere ịnweta ihe ruru minitubers 650 kwa afọ.
Oge ozo nke imeputa nkpuru bu nkpuru nkpuru mbu, nke na enye nchebe karie nke osisi site na ihe ndi ozo. A na-akwadebe usoro nursery na usoro ogbugba mmiri ma chebe ya pụọ ​​na ọrịa ọrịa. A na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ na-arụ ọrụ nke ọma na teknụzụ na gburugburu ebe obibi na -emepụta mkpụrụ nke ahịhịa na -emepụta mkpụrụ nduku, nke na-eme ka nrụpụta kachasị elu na nnukwu mpịakọta wee rụọ ọrụ niile n'oge kachasị mma.
Na mgbakwunye na teknụzụ ejikọtara ọnụ maka ịkụ mkpụrụ poteto, nke gụnyere ntụgharị mkpụrụ, ịkọ ala, fatịlaịza na usoro nchedo ihe ọkụkụ, ihe atụ kachasị ọhụrụ nke igwe ọrụ ugbo ụwa, gụnyere akara John Deere, Grimme, Lemken na ndị ọzọ, enyere aka na mmejuputa atumatu di egwu.
Ndabere maka inweta ngwaahịa dị elu, yana ịmịpụta ihe, bụ omenaala dị elu, nke gụnyere ọtụtụ akụkụ dị mkpa. Nke mbu - njikwa mmeputa nke oma na oge obula nke oru, tinyekwara uche na nsonaazụ ikpe azu, nghota nke atumatu na usoro nke ndi nile sonyere. Ihe mgbochi a gụnyekwara ịhazi na njikarịcha, nyocha oge niile na ịrụ ọrụ na ebe kachasị ike, ọhụụ na mmepe nke azịza ọhụrụ. Raparasi ike na arụmọrụ teknụzụ, ụkpụrụ, usoro, ọnọdụ nke nrụpụta na nchekwa ọrụ, ụkpụrụ steeti na ọrụ nkwekọrịta, ihe achọrọ na iwu, yana ịdọ aka na ntị ọrụ dịkwa nnukwu mkpa.
Akụkụ kachasị mkpa na-arụ ọrụ na isi akụ nke ụlọ ọrụ - ndị ọrụ. Anyị na-emepụta ma zụlite otu ndị ọkachamara na ndị nwere uche.
Maka nke a, mkpali tozuru etozu nke ndị ọrụ, ịgba ume nke atumatu, itinye aka na usoro nke isiokwu ọ bụla na-esonye, ​​ohere nke nghọta onwe onye na igosipụta onwe onye maka onye ọ bụla, ọchịchị onye kwuo uche ya na onye ọrụ ya dị mkpa.
Na mgbakwunye na ọdịmma nke anyị, ụlọ ọrụ anyị na-eburu n'uche ebumnuche azụmaahịa nke ndị mmekọ na ndị ahịa anyị, ebe ọ bụ na mmekọrịta na-aga nke ọma ma na-aga nke ọma bụ ihe ndabere nke mmekọrịta bara uru, na imeghe na ịkwụwa aka ọtọ bụ ụkpụrụ maka ọrụ njikọta ogologo oge.
Ya mere, uzo ohuru nke teknụzụ na nhazi ọrụ, mmezi ọgbara ọhụrụ na mmelite nke teknụzụ dabere na nyocha, yana omume nwere mmetụta dị nro na ndị mmekọ na ndị ọrụ ha, na-enye ohere ịnweta akara ngosi dị elu na usoro mmepụta na ogo mkpụrụ mkpụrụ.
Tags: Nizhny Novgorod mpaghara
Poteto gụnyere n'ime usoro nnata ụlọ nkwakọba ihe nke Kenya
Na mpaghara Samara, mpaghara ala mmiri ga-abawanye